မင်းအလုပ်ပြန်ရဖို့အစွမ်းထက်တဲ့ဆုတောင်း ၃ ချက် ?
အလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်ရန်3အစွမ်းထက်သောဆုတောင်းချက်များ။ အလုပ်ကသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအလုပ်ပျောက်ဆုံးသူများ၌ပင်စိုးရိမ်ပူပန်စရာအကြောင်းဖြစ်သည်။ မေးခွန်း "ဒါပေမယ့်ငါဘာမှားခဲ့တာလဲ" ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကိုမဖြတ်နိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်သည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာနှုတ်ထွက်ခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်သည်သင်နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သည့်အပြင်သင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှအကြောင်းပြချက်များကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်သည်။ ဒီလိမ်လည်မှုသည်ခက်ခဲပြီးလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအလုပ်ပြန်ရရှိရန်ခွန်အားအနည်းငယ်ပေးလိုကြသည်။ သင်၏အလုပ်ဟောင်းသို့ပြန်ရောက်ရန်သင့်အားကူညီရန်အစွမ်းထက်သောပြန်လာသည့်အလုပ်သုံးခုကိုကြည့်ပါ။
1 အလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်ရန်3အစွမ်းထက်သောဆုတောင်းချက်များ
3 San Antonio ၏ကြားဝင်အသနားခံခြင်းနှင့်အတူအလုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဆုတောင်း
4 စိန့် Cyprian ၏ကြားဝင်အသနားခံခြင်းနှင့်အတူအလုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဆုတောင်း
စာနာခြင်း၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်ဆုတောင်းခြင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုလည်းကြည့်ပါ el Mundo အလုပ်သမား:
အိုး! ချစ်သောအမေ Our Lady Aparecida Oh Cassia Oh Holy Rita Oh My ဘုန်းကြီးသော စိန့်ယုဒသဒပ်မဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းတရားများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည်။ နောက်ဆုံးသောကာလ၏သူတော်စင်စန်တိုအက်ပီတိုတိုနှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ခမည်းတော်နှင့်အတူကြားခံဆုတောင်းပေးသူ Saint Edwiges (သင်၏နာမည်အပြည့်အစုံကိုပြပါ) ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်၏အလုပ်သို့ပြန်လာနိုင်ရန်ကူညီပေးပါရန်တောင်းဆိုသည်။ ကိုယ်တော်ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းပါမည်။ ဆုတောင်းပါ။ ၁ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖခင်နှင့်ပင်လယ်ကူးသုံးလေယာဉ်အားကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်အားအစွမ်းကုန်ယုံကြည်ကိုးစားပြီးကျွန်ုပ်၏လမ်းခရီး၊
ဒါပြောပါ အတန်းထဲတွင်3ရက်အဘို့ဆုတောင်းပဌနာဖြစ်နိုင်ရင်တစ်ချိန်တည်းမှာ။ စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်မည့်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောနေရာတစ်ခုကိုလည်းရွေးချယ်ပါ။ သို့မှသာသင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအပြုသဘောဆောင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဤကျေးဇူးတော်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုသေချာသည်.
San Antonio ၏ကြားဝင်အသနားခံခြင်းနှင့်အတူအလုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဆုတောင်း
“ မင်းအံ့သြစရာတွေလိုချင်ရင် San Antonio ကိုသွား၊ မင်းကမာရ်နတ်နဲ့ infernal temptations တွေကနေမင်းထွက်ပြေးလိမ့်မယ်။ ဆုံးရှုံးသွားသောပြင်းထန်သောထောင်ဖောက်မှုများကိုပြန်လည်ရယူပါ၊ ဟာရီကိန်းအမြင့်တွင်ရှိသောဒုက္ခပင်လယ်သို့သွားပါ။ သင်၏အကူအညီတောင်းခံခြင်းအားဖြင့်ပလိပ်ရောဂါ၊ အမှား၊ သေခြင်း ထွက်ပြေးပါ၊ အားနည်းသူများဖြစ်လာပြီးကျန်းမာသောဖျားနာဖြစ်လာသည်။ ပျောက်ဆုံးသောအရာကိုပြန်လည်ရယူပါ။ (ထပ်ခါတလဲလဲ (၃) ကြိမ်) လူဆိုးအားလုံးအလယ်အလတ်၊ ဆုတ်ခွာ၊ ဒါကြောင့် Paduan ပြောပါ။ ပျောက်ဆုံးသောအရာကိုပြန်လည်ရယူပါ။ (၃ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲ) ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကိုဘုန်းထင်ရှားစေပါ။ ဒါဟာအစအ ဦး ၌ရှိသကဲ့သို့, ယခုနှင့်အစဉ်အမြဲအာမင်။ ပျောက်သောအရာကိုပြန်လည်ရယူပါ (၃ ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ပါ) ။ (က) ခရစ်တော်၏ကတိတော်များကိုခံထိုက်ပါစေ။ ပျောက်ဆုံးသွားသောအရာကိုပြန်လည်ရယူပါ (၃ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲ) ကျွန်ုပ်တို့၏ဖခင်နှင့်မိုးသီးမာရိအားဆုတောင်းပါ။
ဒါပြောပါ နေ့စဉ်ဆုတောင်းပဌနာ သို့မဟုတ်လိုအပ်သကဲ့သို့, ကျေးဇူးတော်အောင်မြင်သောအခါစိန့်အန်သိုနီအားကျေးဇူးတင်စကားဖယောင်းတိုင်ထွန်းပါ။ စိန့်အန်တိုနီသည်သင်ဆုံးရှုံးသွားသောအရာတစ်ခုခုအတွက်တောင်းလျှောက်ရမည့် Saint ဖြစ်ပြီးသင်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ငွေကြေးသို့မဟုတ်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့်အခြေအနေမဆိုအတွက်ဆုတောင်းပါ.
စိန့် Cyprian ၏ကြားဝင်အသနားခံခြင်းနှင့်အတူအလုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဆုတောင်း
“ စန်တိုအန်တိုနီယိုသည်မန်ဒီဂိုးပင်၊ Santo Onofre သည် Mirongueiro ပင်ဖြစ်သည်။ အိုး၊ ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်ပရပ်စ်သူတော်စင် ... စာလုံးပေါင်းကောင်းကောင်းတတ်ပုံကိုသိသောလူမည်း။ တိတ်ဆိတ်စွာပြုလုပ်ပါ။ San Cipriano ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ (မင်းရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံကိုပြောပါ) ငါလိုချင်တဲ့အလုပ် (မင်းကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်) လို့ရမယ် ထက်သာ။ ကြီးမြတ်သည် ဤသတင်းကိုလူမည်မျှဖတ်လိမ့်မည်! Saint Cyprian၊ နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်နှင့်ခရစ်ယာန်၊ ဖြောင့်မတ်သောသူ၊ ဆိုးသွမ်းသူ၊ အသိပညာရှိသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဘာသာရေးအနုပညာတွင်လွှမ်းမိုးထားသူဖြစ်ပါသည်။ ဤအလုပ်ကိုပြန်လည်ရရှိရေးရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသား၊ သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၊ ပင်လယ်၊ လေ၊ မီး၊ သဘာဝနှင့်စကြဝuniverseာတို့၏စွမ်းအားအားလုံးကိုကျွန်ုပ်လက်ထဲသို့ကျရောက်စေပြီးကျွန်ုပ်နှင့်လုံးလုံးလျားလျားချည်နှောင်ထားရန်ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသည် (သင်၏အမည်အပြည့်အစုံကိုဖော်ပြပါ) ။ ဒီကုမ္ပဏီ (ကုမ္ပဏီအမည်ပြောပါ) မှာဒီအလုပ်ဟာကျွန်တော့်အတွက်အမြဲဖြစ်ပါစေ၊ ဒီ HOLY POWER အောက်မှာဒီအလုပ်ဟာကျွန်တော် မှလွဲ၍ ဘယ်သူ့ကိုမှပိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး (သင်၏နာမည်အပြည့်အစုံကိုပြောပါ) ။ ကျွန်ုပ် မှလွဲ၍ ငှားရမ်းသူအရာရှိ မှလွဲ၍ အခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုမတွေ့ပါစေနှင့် (သင်၏အမည်အပြည့်အစုံကိုဖော်ပြပါ) ။ ငှားရမ်းရေးမန်နေဂျာကကျွန်ုပ်အား (သင်၏နာမည်အပြည့်အစုံကိုပြောပါ) ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပြရန်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့သည်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အမည် (သင်၏အမည်အပြည့်အစုံ) ကိုကြားရသောအခါကျွန်ုပ်သည်ထိုသူဖြစ်ကြောင်းသေချာပါလိမ့်မည်။ ။ the the work တောင်ပေါ်သို့တက်သွားသောအံ့ဖွယ်ကောင်းသောဆိတ်၊ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအလုပ် (ကုမ္ပဏီနာမည်ဆိုပါစို့) ကျွန်ုပ်ကိုယူဆောင်လာပါ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်, ပြုလိမ့်မည်, ပြုလိမ့်မည်။ ငါယုံကြည်တယ်၊ ငါ့ထံမှာငါလိုချင်တဲ့အလုပ် (မင်းရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံကို) အမြဲတမ်းရရှိမယ်။ ”
ဒါ ဆုတောင်းခြင်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သည် ထိုသို့စဉ်အတွင်းလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ် ကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်နှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းမှာ3ရက်! ဒီအဖြစ်အပျက်သစ်မှာမင်းရဲ့ဘဝကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဖို့မိနစ်အနည်းငယ်ယူပြီးအလုပ်ဟောင်းကိုပြန်သွားလိုက်ခြင်းကသင့်ကိုပျော်ရွှင်စေမှာပါ။ သင်၏အလုပ်ဟောင်းသို့ပြန်သွားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ဟုသင်အမှန်တကယ်ဆုံးဖြတ်ထားပါကသင်၏အလုပ်ပြန်ရရန်နှင့်သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုထပ်မံခိုင်မာစေရန်အရူးမရှိသောထုံးတမ်းစဉ်လာ ၄ ခုကိုစစ်ဆေးပါ။